के छ आज सुन-चाँदीको नया अपडेट ? हेर्नुहोस् …::Nepal's Online News Portal
के छ आज सुन-चाँदीको नया अपडेट ? हेर्नुहोस् …
काठमाडौं । आज मंगलबार सुनको भाउ स्थिर रहेको छ। आज छापावाल सुन प्रतितोला ६२ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ।
त्यस्तै आज तेजावी सुनको मूल्य पनि स्थिर रहेको छ। आज तेजावी सुन प्रतितोला ६२ हजार रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ।
आज सुनसँगै चाँदीको भाउपनि स्थिर छ । आज चाँदी प्रतितोला ७ सय १५ रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ।
काठमाडौँ उपत्यका बाहेकका जिल्लामा भने नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले तोके बमोजिम सुन चाँदीको मूल्य केही बढी पर्न सक्ने छ।
बजार बाट अन्य
गण्डकी प्रदेशलाई ३२ अर्ब १३ करोडको बजेट …
१ असार, पोखरा । गण्डकी प्रदेशले ३२ अर्ब १३ करोडको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री किरण गुरुङले आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाखको बजेट पेश गरेका हुन् । चालु खर्चतर्फ १२...
कर्णाली प्रदेशले ३४ अर्ब ३५ करोडको बजेट ल्यायो…..
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशले ३४ अर्ब ३५ करोडको बजेट ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लागि उक्त बजेट ल्याएको हो । आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश ज्वालाले ३४ अर्ब ३५...
सुनको भाउ झन् उकालो ! तोलाको कति ?
काठमाडौं । आज आईतबार सुनको भाउ झन् उकालो लागेको छ । आज छापावाल सुन प्रतितोला ६३ हजार रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यसअघि छापावाल सुन ६२ हजार ४ सय रुपैयाँमा...
सुनको भाउ स्थिर ! यस्तो छ बजारभाउ…
आज सोमबार सुनको भाउ स्थिर रहेको छ। आज छापावाल सुन प्रतितोला ६२ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। त्यस्तै आज तेजावी सुनको मूल्य पनि स्थिर रहेको छ। आज...
कहिलेबाट पाइन्छ त बढेको वृद्ध भत्ता ? पढ्नुहोस्
काठमाडौं, २५ जेठ । ‘मैले त हाम्रो भत्ता बढेको थाहै पाएकी थिइनँ, बढेको भए त राम्रो भयो, म त एकदम खुसी भएँ । अब कहिलेबाट पाउने हो ? तपाईलाई थाहा छ...
एक्कासी बढ्यो बिदेशी मुद्राको भाउ, कुन देशको कति ? हेर्नुहोस्
काठमाडौं । आज अमेरिकी डलरसहित प्राय सबै देशको भाउ बढेको छ । आज शनिबार एक अमेरीकी डलरको खरिद मूल्य ११० रुपैयाँ ८६ पैसा रहेको छ । यसैगरी बिक्री मूल्य १११ रुपैयाँ ४६ पैसा रहेको...
शुक्रबार नेपाली बजारमा सुनको मुल्य स्थिर …
काठमाडौं, २४ जेठ । साताको छौटौं दिन शुक्रबार नेपाली बजारमा सुनको स्थिर रहेको छ । बुधबारको तुलनमा बिहीबार सुन प्रति तोलमा ३ सय रुपैयाँले बढेको थियो । बुधबार ६२ हजार रुपैयामा कारोबार भएको सुन बिहीबार...
सुनको भाउ एकैदिनमा तोलामा १५ सयले बढेपछि …
भन्सार दर बढेसँगै सुनको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ। एकै दिन प्रतितोला १५ सय रूपैयाँले सुनको मूल्य बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहीबार प्रतितोला ५९ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन शुक्रबार प्रतितोला...
सुनको भाउ स्थिर !
काठमाडौं । आज बिहीबार सुनको भाउ स्थिर रहेको छ। आज छापावाल सुन प्रतितोला ५९ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। त्यस्तै आज तेजावी सुनको मूल्य स्थिर रहेको छ।...
बढ्यो सरकारी कर्मचारीको तलब ! कसको कति पुग्यो ?
१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको तलब बढाएको छ । बुधबार संसदमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कर्मचारीको तलववृद्धि गरेका हुन् । सरकारले विभिन्न पदमा फरक-फरक अनुपातमा...